Tirada dadka u dhintay cudurka Coronavirus oo aad u korodhay
Dhinaca kale, la-taliyaha sare ee dowladda ee cudurkan, ayaa sheegay inuu rajeynayo in faafitaanka cudurkan uu dhammaado bishan February.
CAALAMKA | Tirada dadka ku dhintay cudurka Coronavirus ee dalka Shiinaha ayaa dhaaftay 1000 qof, waxaana sare usii kordhaya walaaca laga qabo heerka uu la eg yahay dhaawaca uu gaarsiiyey dhaqaalaha dalka.
Shirkadaha dalka Shiinaha qaarkood ayaan weli shaqada kusoo laaban kadib markii fasax dheeri ah ay siiyeen shaqaalahooda dabaa-deggii sanadka cusub kadib, halka kuwa kalena ay dowladda weydiisteen balaayiin dollar oo deyn ah, si ay usii shaqaayaan.
Shirkadaha qaarkood ayaa sidoo kale shaqada ka eryey dad badan, inkasta oo ay jirto in madaxweyne Xi Jinping uu shacabka u ballan-qaaday inaysan jiri doonin shaqo ka eryid badan.
“Xilliga uu joogsan lahaa fiditaanka cudurka waxaan filayaa inay noqoto bartamaha ama dhammaadka bishan,” ayuu yiri Zhong.
Waxa uu sheegay in tirada kiisaska cusub ee cudurkan ay hoos u dhacday gobollada qaar.
Guddiga Caafimaadka Qaranka ayaa dhinaca kale sheegay Talaadadii in 108 qof oo cusub ay u geeriyoodeen cudurka, taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigeysa 1016 qof.
DF oo shuruud ku xirtay dadka dibada u aadaya baaris la xiriirta Covid19
Soomaliya 16.07.2020. 16:15
Garoonka diyaaradaha ayaa la dhigay qalab casri ah joojinaya shaqsiyaadka isku daya in ay hareer-maraan.
WHO oo ka digtay khafiifinta xayiraadaha safmarka Coronavirus
Caalamka 20.06.2020. 08:41
Dadka uu ku dhacay Covid-19 guud caalamka oo dhaafay shan milyan
Caalamka 21.05.2020. 10:04
Coronavirus oo la tuhunsan yahay in uu galay xabsiga dhexe ee Muqdisho
Soomaliya 13.05.2020. 15:00
Kiisaska Coronavirus ee Soomaaliya oo ku dhow kun, geerida oo korortay
Soomaliya 09.05.2020. 17:30
Guddiga Mareykanka u qaabilsan ka hortagga Coronavirus oo la kala dirayo
Caalamka 06.05.2020. 07:10